I7 Best Nootropics (Smart Drugs) mumusika weNoopept
/Blog/garari/I7 Best Nootropics (Smart Drugs) mumusika weNoopept
Posted on 09 / 16 / 2018 by 阿斯劳 akanyora garari.
MushongaNoopept“, Yaishandiswa kugadzirisa ndangariro, yakagadzirwa muna 1992 neboka rekutsvagisa reScientific Research Institute of Pharmacology. Zakusov VV Uye ichi chinodhaka chakazivikanwa kwete muRussia chete, asi zvakare muUS, uko kwaive nemvumo mushure memakore matatu, mushure mekunyora kumba. Kuendeswa kwekodzero dzekutengesa uye huwandu hwekushandiswazve kwekushambadzira hakuna kukanganisa mukurumbira wemushonga. Makore makumi maviri mushure mekugadzirwa kweNoopept, kutengesa kwayo kwaifungidzirwa pamadhora 6.2 mamirioni pagore.
"Noopept" inosiyana nemamwe madootropic madhiragi, akaverengerwa muboka iri, mukuti panguva imwe chete inobata nhanho dzese dzekurangarira.
• kutanga kushandiswa kwemashoko asina kupinda,
• kuchengetedza kwenguva refu kwenguva refu,
• kugadziriswa kwemashoko nenguva.
Kufungisisa kweiyo mashandiro ekuita kwemaootropic madhiragi zvakanyanya uye "Noopept" kunyanya ichabatsira kuenzanisa kwakaringana kwemushonga
pamwe nevamwe vamiririri ve nootropic boka.
10 mg yaN-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester inopindira muhutachiona hwemagetsi husina kuchinja mudumbu uye zvino, kukunda ropa-yeruzivo rwomumakumbo, kupinda muuropi, apo, mushure memaminitsi e15, zvinowanikwa pane rimwe ropa , uye kuongororwa. Hafu-upenyu kubva plasma yeropa inowanikwa mumaawa 0.38. Izvo zvinhu zvishoma nezvishoma zvinoshandiswa, panguva iyo phenylacetic acid, cycloprolylglycine uye phenylacetylproline inoumbwa. Bioavailability inotarirwa pamwero we99.7%.
Noopept powder Zviratidzo
Noopept inoshandiswa mukurapa kwekucherechedza, kukanganisa kurasikirwa, pamwe chete nezvimwe zvinogadzirisa maitiro kana mararamiro anonzi labile anokonzerwa nezvakaitika shure kwemashure endcommunity, asthenic disorders, cerebral vascular insufficiency, utano hwehupfungwa uye hutachiona hunoita kuti kuderedza zvigadziriswe zvingangodaro.
Piritsi "Noopept" inotorwa mushure mekudya. Pamutero wekutanga we 20 mg wakakamurwa kuita miviri miviri (mangwanani nemanheru), pasina kukwana kwakaringana uye kushivirira kwakanaka, unogona kuenda kuna 30 mg (katatu pazuva kusvika 10 mg), uchiverenga kuitira kuti kugashira kwekupedzisira kwanga kusiri kupfuura Maawa 18. Imwe kosi inotora kubva ku1.5 kusvika kumwedzi mitatu, uye yechipiri kosi inogona kuitiswa nekuzorora kwemwedzi mumwe.
Noopept Side effects uye contraindications
Anenge zvose nootropics powder zvinoreva kurambidzwa kushandiswa kwevakadzi panguva yepamuviri. Nekudaro, nekugamuchirwa kwe "Noopept" mune rondedzero yekupokana inosanganisirwa:
• kuregererwa kwezera kumakore e18,
• kukwana kwe lactase,
• kuratidzirwa kutyora muropa uye itsvo,
• lactose kusawirirana.
Chinhu chekupedzisira chakanangana nehutachiona hwekuita kune lactose (mukaka) pakati pevaSlavs vekumabvazuva kunoonekwa mu16-18% yevagari. KuEurope, ichi ndicho chiyero chepakati - zvimwe zveAustria (kusvika pa20%), Finns (18%), maItaly (zvinoenderana nenharaunda kubva pa15 kusvika 52%), Balkan uye vagari veKrete (56%). Kumaodzanyemba kweFrance, nhamba iyi inosvika ku67%, uye muSicily - 71%. Iyo pesenti yekusagadzikana kwe lactose pakati pevagari veCentral Asia makumi masere - izvi zvinoreva kuti vanhu vana kubva pavashanu havagone kushandisa mushonga uyu we nootropic. Muchiitiko ichi, zvinonyanya kukosha kuchinjira kumamwe marapirwo echisikigo ane yakafanana nootropic mhedzisiro (semuenzaniso, "HeadBooster"), asi pamwe nekugashira "Noopept", zvakakosha kuti utarise hypersensitivity kune izvo zvikamu. .
Zvimwe zvinokonzeresa zve "Noopept" zvinosanganisira kusagadzikana uye mukana wekusimudza BP kune vanhu vane arterial hypertension.
Mhinduro ya "nootropian" nezve chiito che "Noopept" uye zvakasikwa zvakafanana
Vanhu vanoshandisa nootropic zvinodhaka zvekurapa, asi kuti vawedzere ndangariro uye kukurudzira chiitiko chehuropi ("nootropics"), Kazhinji inosangana nemhedzisiro yezvinhu zvakasiyana uye inogona kuita yekuenzanisa kuzviisa pasi kuongororwa.
Saka, "Noopept" inotsanangurwa semushonga, iyo yatove muvhiki yechipiri yekugashira inokutendera iwe kuti uchengetedze basa rehungwaru zuva rese. Izvo zvinoonekwa kuti hapana misoro inowanzoitika nemutoro mumwe chete, kana mushonga wacho usina kutorwa kwenguva yakareba. Kuparadzaniswa kwekutaura kwezviroto, izvo kana uchigamuchira ino nootropy inova yakajeka uye yakajeka.
Hunhu hwakafanana hwerondedzero yekuzviisa pasi, semuenzaniso, Semax, Optimentis (Optimumis), HeadBooster (HeadBuster), nezvimwe, asi hazvisi zvese gadziriro zvinotsanangurwa nenzira imwechete. Semuenzaniso, "Fenibut", iyo inoshandiswawo kusimbisa ndangariro uye kutarisisa, kudzikisira huta, panguva imwe chete kunoita kuti munhu anyanye kushushikana nekuita zvishoma zvishoma.
Noopept haisi kupiwa kune varwere vane chirwere chakakomba chekushaya simba, chiropa chinoshaya simba, lactose inoshaya, glucose-galactose malabsorption kana lactose kusagadzikana. Mukuwedzera, zvakakosha kurega kutsanangurira mishonga kuva nepamuviri, kuora, pamwe nevarwere vari pasi peCNUMX nevarwere vane munhu mumwe munhu anogadzirisa hutachiona hwemishonga.
Kushanda mukudzivirira uye lactation
Mishonga yezvinodhaka Hoenopt yekuyamwisa uye vakadzi vane pamuviri isingadikanwi, sezvo pasina ruzivo rwechokwadi pamusoro pezvinhu zvakasvibiswa zvechikonzero chekusava nekwakamukira kwekuberekwa kana mwana anozvarwa anonwisa vana vakadzi vanorapwa nemishonga.
Kusarudzwa uye Kutungamirirwa
Tariro inoshandiswa pakurongedza muromo. Matafura anofanira kutorwa mushure mekudya uye kunwa mvura zhinji. Nekuda kwekuti chirwere ichi chinokonzera kufadza, chinofanira kutorwa mushure mokunge 18: 00. Nguva yenguva yekurapwa uye muyero wemishonga chiremba anoverenga achizvimirira.
Pakutanga kwehutano, murwere anorayirwa kutora 10 mg yemishonga 2 nguva pazuva. Kana, kana uchitora mushonga wacho mudiki, iwe hauna kukwanisika kuti uwane hutano hunobatsira, huwandu hwekugamuchira hunowedzerwa kusvika katatu pazuva.
Chirwere ichi chinotarisirwa kushandiswa kwenguva refu, iyo nzira yekurapwa inogona kusiyanisa kubva ku1.5 kusvika ku3 mwedzi. Zvinokwanisika kuitisa zvidzidzo zvekare zvekurapa mazuva makumi matatu mushure mekupedzisira kwekushandisa zvinodhaka.
Kana kurwadziwa kuchidikanwa kutora Noopept mumakiritsi akareba kwenguva yakareba, ipapo murwere anofanira kunge ari pasi pekucherechedza kwechiremba nguva dzose.
Kunyangwe nekutambira kwaNoopept mumakirwe akakwirira, varwere havaiti zviratidzo zvehutu hunopisa. Pasinei nekusvibiswa kwechirwere, kana ukacherechedza kuti murwere ane chirwere chinotora chirwere ichi chepamusoro, zvino anofanira kusuka dumbu uye kuvimbisa kubudiswa kwekabhoni nekudhakwa kwakanyanya.
Noopept zvakanaka zvinoregererwa. Panguva yekurapwa, varwere vanokura kuwedzera kwehutano uye zvakasiyana-siyana zvinokonzerwa neoriginal.
Kana, pakushandisa Noopept, murwere ane zviratidzo zvisingagadziriswi zvemishonga, vanofanirwa kuziviswa nokukurumidza kune chiremba anorapa uyo achasarudza pamusoro pekupikira kwekuwedzera kurapwa.
Noopept powder Mitemo nemamiriro ekuchengetedza
Noopept inofanira kuchengetwa munzvimbo yakaoma, yakachengetedzwa kubva panzvimbo yeruvara, iyo isingasviki vana. Nguva yekuchengetwa kwegadziriro Hoenopt ndeye makore 3.
I7 Best Nootropics (Smart Drugs) mumusika weBromantane	I7 Best Nootropics (Smart Drugs) mumusika weSaifiram